कागजातहरू सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
रूस देखि इस्राएललाई प्रविष्टि लागि के कागजात आवश्यक हो?
रसियाबाट इजरायल प्रवेश गर्न कस्ता कागजातहरू आवाश्यक छन्? राहदानी (कम्तिमा months महिनाका लागि मान्य) राउन्ड-ट्रिप टिकटहरू कहिलेकाँही तलब प्रमाणपत्र र अन्य कागजातहरू सोध्छन् जुन तपाईंले उडानमा प्रवेश गर्नुभयो पासपोर्टको प्रतिलिपि भुक्तान गर्ने क्षमताको पुष्टि गर्न ...
तपाई स्पेनमा भिसाको लागि के चाहिन्छ? र कति लामो भयो यो?
स्पिन गर्न तपाईलाई भिसाको आवश्यकता के छ? र यसले कति लामो समय लिन्छ? एक हप्ता र न्यूनतम कागजातहरू राम्रो साथीहरूको उपस्थितिमा जो यो व्यवस्था गर्न सक्दछ। कम्तिमा months महिना पछि वैध अन्तर्राष्ट्रिय पासपोर्ट ...
मलाई मेरो ठेगाना अंग्रेजीमा लेख्न आवश्यक छ। लेखको के हो?
मलाई अंग्रेजीमा मेरो ठेगाना लेख्नु पर्छ। लेख्ने क्रम के हो? चेल्याबिन्स्क क्षेत्र। नागाबाक जिल्ला। Ferschampenoise को गाउँ। सडक मेकानाइजरहरूको घर apartment 38 अपार्टमेन्ट Bra। ब्रेयर युरी एन्ड्रीविच। हुलाक कोड9457650० देश, शहर, ...
के मलाई मास्कोबाट क्यालिनिनग्राद र फिर्ताको यात्राको लागि एक पासपोर्ट चाहिन्छ?
के मस्कोबाट कालिनिनग्राड र पछाडि यात्रा गर्दा मलाई राहदानी चाहिन्छ? अचम्म कालिनिनग्राद क्षेत्र र बाँकी रूसी बीचमा लिथुआनियाली गणतन्त्र भिसा नहुने रूसी नागरिकहरू द्वारा एक पटकको यात्राका लागि ...
मल्टीवासा के हो?
मल्टिभिसा भनेको के हो? तपाईलाई मल्टिभिसाको बारेमा पहिले नै उत्तर दिइयो। र किनकि केही पूर्ण बकवास लेखिएको छ, म बाँकी प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछु)) एक विशेष दूतावासको विवेकको अवधिमा। धेरै जसाे…
के मलाई जर्जियामा प्रवेशको लागि पासपोर्ट चाहिन्छ?
मलाई जर्जिया प्रवेश गर्नका लागि मलाई राहदानी चाहिन्छ? ... तपाईलाई चाहिन्छ ... उनी CIS का सदस्य छैनन् .. रुसी नागरिकहरूले जर्जियामा to ० दिन भन्दा बढीको अवधिमा प्रवेश गर्नका लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। सीमा पार गर्दा ...
मस्को र पछाडि कैलिनिन्ग्रादमा रेल यात्रा गरेर कुन कागजातहरू आवश्यक छ?
मस्कोबाट क्यालिनिनग्राडबाट र पछाडि रेलमा यात्रा गर्न कुन कागजातहरू आवश्यक छन्? तिमीलाई कस्तो छ रूस देखि रूस र केही ट्रान्जिट कागजातहरू यात्रा गर्न? राहदानी…
मेरो नाउँ परिवर्तन भएपछि कूटनीति पाउन कति लामो लाग्छ?
थर परिवर्तन गरेपछि राहदानी कति लामो हुन्छ? यो एक रूसी पासपोर्ट जस्तै उस्तै देखिन्छ, लगभग एक महिना परिवर्तन गर्न समय दिनुहोस्! उनी आफैंले त्यो वर्ष विवाह गरे, उनको अन्तिम नाम परिवर्तन गरे, तर ...
ई-टिकट के हो? कन्सर्टका लागि ई-टिकट के हो, यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने, तपाइँ पछि यसको साथ के गर्नु पर्छ?
इ-टिकट भनेको के हो? कन्सर्टको लागि इलेक्ट्रोनिक टिकट भनेको के हो, यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने, तपाईंले यसलाई पछि के गर्नुपर्छ? तपाइँ कन्सर्टको लागि टिकटको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ वा इन्टरनेटमा प्रदर्शन गर्नुहोस्। त्यसोभए आउनुहोस् ...
सानो बच्चाको लागि पासपोर्ट प्राप्त गर्न कुन कागजातहरू आवश्यक छ
नाबालिग बच्चाको लागि राहदानी लिन कुन कागजातहरू आवश्यक हुन्छ?
म कसरी जाँच्न सक्छु यदि मेरो विरुद्ध एक न्यायिक प्रक्रिया दायर गरिएको छ भने?
म कसरी मुद्दा लगाउन सक्छु भनेर जाँच गर्न सक्छु? तपाईं सक्नुहुन्न…। त्यहाँ आन्तरिक मामिला निदेशालयमा जानुहोस् र तपाईं फेला पार्नुहुनेछ =)) जो जान्दछन् कि कसरी मेरो नाम प्रयोग गरेर थाहा पाउँदछु मसँग एउटा परीक्षण हुनेछ। यदि ...
रेलवेको वेबसाइटमा कति घडीले इलेक्ट्रोनिक टिकटको बिक्री गर्छ?
रूसी रेलवे वेबसाइटमा इलेक्ट्रोनिक टिकटको बिक्री कुन समयदेखि सुरू हुन्छ? मैले साइट 7-40० मा मॉस्को समयमा खोलेको छु, यो अझै 8 थिएन तर टिकट बिक्री पहिले नै चलिरहेको थियो, र त्यहाँ सामान्य टिकटहरू थिएन ...
संसारको सबैभन्दा ठूलो टापु
डेकाटप.कॉमका अनुसार विश्वका सबैभन्दा ठूला टापुहरू १० सबैभन्दा ठूलो टापुहरू विश्वका १० शीर्ष टापुहरू छन्। टापु प्राकृतिक मूलको जमिनको एक टुक्रा हो, चारै तिर घेरेको ...
यसले कति पटक इटलीमा भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछ?
इटालीको भिसा लिन कति समय लाग्छ? भिसा प्रशोधन गर्न अब working कार्य दिनहरू लिन्छन् यदि तपाईं व्यक्तिगत रूपमा वाणिज्य दूतावासमा वा आमन्त्रित दूतावासमा हुनुहुन्छ भने। तर तिनीहरू भन्छन् कि अधिकतम ...
खुला-समाप्त राउन्ड ट्रिप उडान टिकटको अर्थ के हो?
खुला-समाप्त राउन्ड ट्रिप उडान टिकटको अर्थ के हो? यदि तपाईंलाई ठ्याक्कै थाहा छैन तपाईं कहिले फर्कनुहुनेछ, तब खुला फिर्ताको मिति लिएर टिकट किन्नुभन्दा राम्रो हुन्छ। खोल्नुहोस् ...
म 2016 वर्षमा यूक्रेन यात्रा गर्न एक पासपोर्ट आवश्यक हुनेछ
२०१ 2016 मा युक्रेन जानका लागि राहदानी चाहिन्छ? हो, रसियनहरूलाई युक्रेन प्रवेश गर्न राहदानी चाहिन्छ। युक्रेनको यात्राको लागि, राहदानी आवश्यक छ, किनकि यसको उज्यालोमा ...
कार्य तालिका। पासपोर्टको दर्ता
vyborg ovir को खुल्ने समय। राहदानीको पंजीकरण अब OVIR होइन, तर FMS। कल गर्नुहोस्, पत्ता लगाउनुहोस्: Vyborg को Vyborgsky जिल्ला को FMS, st। ट्र्यावनाया, २ ((26१81378) 508०11-११, - (8१813-78)) -5-०07-63 http:// http://vbgcity.ru/?q=ru/node/3583 काम पंजीकरण विदेश ...
बालबालिकाका रेल टिकटहरू कति वर्षमा बेचेका छन् र कति प्रतिशत उनीहरुका किशोरीहरु भन्दा सस्ता छन्?
बच्चाहरूको रेलवे टिकटहरू कति बेरसम्म बिक्री हुन्छन् र कति वटा उनीहरू वयस्कहरू भन्दा सस्तो छन्? बच्चाहरुको गाडीवाट नियमहरु मार्च २, २००2को रूसी संघ सरकारको डिक्रीको आधारमा १११ "" ...
Aeroflot को लागि एक इलेक्ट्रनिक टिकट कसरि छापें?
कसरी एयरोफ्लट ई टिकट प्रिन्ट गर्ने? PRINTER लाई प्राप्त एरोफ्लट फाइल पठाउनुहोस् ... कम्पनीमा तपाईंको व्यक्तिगत दर्ता कार्यालयबाट आदेश द्वारा, वा साबुनबाट जुन तपाईं अनलाईन खरीदको पुष्टिकरण प्राप्त गर्नुभयो .... फ्लश ...
नमस्ते, अमेरिकी भिसाको लागि कन्सुलर शुल्क कहाँ छ?
नमस्कार! अमेरिकी भिसाका लागि कन्सुलर शुल्क कहाँ तिर्ने? बैंक मार्फत नगद भुक्तान प्रत्येक आवेदकले राइफाइसेन बैंकको कुनै पनि शाखामा कन्सुलर शुल्क तिर्नु पर्छ। भुक्तानी नगद मा गरिएको छ। बैंकमा तपाईंले भर्नु पर्छ ...
102 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,818 प्रश्नहरू।